योगी नरहरीनाथका दुर्लभ पुस्तक प्रदर्शनीमा राखिँदै « प्रशासन
योगी नरहरीनाथका दुर्लभ पुस्तक प्रदर्शनीमा राखिँदै
वेद, वेदान्त, इतिहास, पुरातत्व, पुराण लगाएत मानव जीबनसंग सम्बन्धित विषयका ज्ञाता योगी नरहरीनाथ एक प्रकाण्ड विद्वान नै मानिन्छन् । कालीकोट जिल्लाको लालू गाउँमा जन्मिएका योगी नरहरीनाथले पश्चिम नेपालबाट शुरु गरेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक खोजलाई पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म भ्याएका छन् ।
योगी नरहरीनाथ राष्ट्रबादी थिए भन्ने कुराको उदाहरण दिइरहनु पर्दैन । योगीका कतिामा राष्ट्रियताको ज्वलन्त उद्घोष पाइन्छ । इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन, पुरातत्व, जनजीवन, पशुपन्छी, वनस्पति लगाएत स्थानविशेषमा राष्ट्रियतालाई जोडतोडका साथ उठाएको भेटिन्छ । यसै सन्दर्भमा २००९ साल देखि नेपाल एकिकरणका नायक राष्ट्रपिता पृथ्बीनारायण शाहको जन्मोत्सवलाई नागरिकको सहभागीतासहित मनाउन योगीको ठूलो योगदान रहेको श्रीवृहद्आध्यात्मिक परिषद्ले जनाएको छ । उनैद्धारा २०२२ सालमा स्थापना गरिएको श्रीवृहद् आध्यात्मिक परिषद्ले यतिबेला पृथ्वीजयन्तीकै अवसर पारेर उनका पुस्तकहरुको समेत प्रदर्शनी गर्ने भएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमले परिषद्का महासचिव विश्व केसी (पोखरेल)संग गरेको कुराकानीः
पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा योगी नरहरीनाथका पुस्तक प्रदर्शनी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, पृथ्वी जयन्ती र योगी बीच के सम्बन्ध ?
नेपालमा २००७ सम्म त राणा शासनै थियो । जव प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि योगी नरहरी नाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्बीनाराणण् शाहको जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ भनेर प्रकृया शुरू गर्नुभयो । त्यो भन्दा पहिले पनि मनाइन्थ्यो होला तर राणा परिवारमा कसरी मनाइन्थ्यो त्यो कुरो थाहा भएन । जनताको सहभागिता थिएन ।
२००९ सालदेखि योगी नरहरीनाथले सरकारसंग समन्वय गरेर एउटा समारोह समिति गठन गरी आफै त्यो समितिमा बसेर राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेको हो । योगी जीले त्यो प्रयास नगरेको भए पनि पृथ्वी जयन्ती त हुन्थ्यो होला तर कुन रूपमा हुन्थ्यो त्यो यसै भन्न सकिदैन । तर, संस्थापक रूपमा यसको प्रारम्भ योगी नरहरीनाथकै अग्रसरतामा भयो । उहाा जतिन्जेल बाँच्नुभयो । प्रत्येक वर्ष पृथ्वी जयन्तीको दिनमा एउटा न एउटा कार्यक्रम गरेर मनाउनु भएको छ । त्यसकारण योगी नरहरीनाथ र पृथ्वी जयन्तिलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा नहेरेर संगसँगै एउटै रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पुस्तक प्रदर्शनी एकेडेमिक प्रकृया पनि भएकोले हामीले यसपालिदेखी पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर पुस्तक प्रदर्शनीको प्रारम्भ गरेका छौं ।
यस अघि पनि योगी जी का पुस्तक प्रदर्शनी गरिएको थियो, यस पटक थप नयाँ पुस्तक पनि राखिने छन् कि ?
योगी नरहरीनाथका ५ सय ७१ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् भने करीब दुइ हजारको संख्यामा अप्रकाशित पुस्तकहरुको पाण्डुलिपि फेला परेको छ । हामीले त्यसलाई प्रकाशित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । प्रकाशित पुस्तकहरू मध्येबाट करीब ५० वटा हामीले बिक्रिका लागि राखेका छौं । त्यसैगरी दुर्लभ ५० वटा पुस्तक हेर्नका लागि मात्रै राखेका छौं ।
पुस्तक प्रदर्शनीको औपचारिक उद्घाटन कसले गर्ने कार्यक्रम छ ?
यसको औपचारीक उद्घाटन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै गर्ने भएको हुनाले हामीले गतवर्ष पनि कुलपतिज्यूबाट नै गराएका थियौं । यसपाली पनि कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतिज्यूले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
गतवर्षको पुस्तक प्रदर्शनीको अनुभव कस्तो रह्यो ?
गत वर्ष मंसिरको २१, २२ र २३ गते पहिलो पुस्तक प्रदर्शनी गरेका थियौं । त्यो प्रदर्शनीमा बहुसंख्यक मान्छेहरुबाट राष्ट्रिय चिन्तनसँग सम्वन्धित जस्तैः दिव्योपदेशहरू, इतिहास प्रकास लगायतका पुस्तकको माग बढी आएको थियो । शिखरणी यात्रा जस्ता पुस्तकको माग बढी आएकोे थियो । यसपालिको प्रदर्शनीमा पनि हामीले तिनै पुस्तकलाई फोकस गर्दै छौं ।
गत वर्ष नराखिएका तर योगी जिका चर्चित अन्य किताव पनि हेर्न पाइन्छ कि यसपाली ?
योगी नरहरीनाथले २००४ सालदेखि पुस्तक लेख्न शुरू गर्नुभएको रहेछ । २००४ सालदेखि २०५९ सालसम्म छापिएका सबै गरेर अहिले हामीसँग २ सय ३९ लेख रचना संकलन भएका छन् । २ सय ३९ लेख रचना मध्ये गत वर्ष १८ लेख रचना प्रकाशन गर्न सकेका थियौं । यसपाली २५ वटा जस्तै गायत्री मन्त्रहरू, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश जुन खस नेपाली भाषामा अथवा गोर्खाली भाषामा प्रकाशन भएको थियो त्यसलाई योगी नरहरी नाथले २०१५ सालमा संस्कृत भाषामा प्रकाशित गर्नुभएको छ । त्यो पनि प्रकाशन गर्दै छौं ।
त्यसैगरी पशुपति नाथको दर्शन विधि, गाइको महत्व, हिन्दु राष्ट्रमा गाइको महिमा, भगवान बुद्धका नौं अवतारको बारेमा व्याख्या, विश्वयुद्ध बौद्ध महासंघको अवधारणा लगायत पुस्तकहरु प्रकाशित गर्दै छौं । हामीले विश्वहिन्दु संघ मात्र बुझेका छौं । बौद्ध महासंघ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने योगी नरहरीनाथको अवधारणा थियो । त्यो प्रशासन गर्दै छौं ।
नारी जातिको महिमा सबैले जान्नुपर्छ भनेर नारी जातिलाई फोकस गरेर लेख्नु भएका पुस्तक लगाएत हिमाली बीर गोर्खाजातिको मातृभाषा र यसको महिमा, महत्व लगाएत विषयमा लिखित पुस्तकहरु प्रकाशित गर्दैछौं ।
थप केही जानकारी छन् कि ?
योगी नरहरीनाथले जुन योगदान गर्नुभएको थियो त्यो आफ्नो लागि नभएर सिंगो राष्ट्रका लागि हो । हामी जे गर्दै छौं त्यो पनि राष्ट्रिय हितकै उद्देश्यले गर्दै छौं । सबै राष्ट्रबादी व्यक्तिहरू मिलेर त्यसको सदुपयोग गरौं । त्यसले राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउँछ । त्यसले राष्ट्रको मौलिक पहिचानलाई जिवन्त राख्न मद्यत पुर्याउँछ । पुस्तक प्रदर्शनीमा पनि थुप्रै कुराहरू पाइन्छन् । पुस्तक प्रदर्शनीलाई हामी सदुपयोग गर्न सक्छौं । सदुपयोग गरौं । योगी जी का पुस्तकलाई संकलन र संरक्षण गर्ने उद्येश्यले योगी नरहरीनाथ पुस्तकालय अर्थात संग्राहलय स्थापना गरिएको छ । त्यसको पनि सदुपयोग गरौं भन्ने मेरो अनुरोध छ ।
Tags : पृथ्बीनाराणण् शाह पृथ्वी जयन्ती योगी नरहरीनाथ विश्व केसी पोखरेल